Ka Hor Kulamada 12-Aad Ee Horyaalka La Liga, Halkan Kaga Bogo Warbixinaha Caafimaad Ee Kooxaha Barcelona, Real Madrid Iyo Atletico Madrid Ee Dhibaatooyinka Badan La Kulmaya. | Laacib.net
Dhaawacyada ciyaartoyda kooxaha waa wayn ee La Liga ayaa xili ciyaareed noqday kuwo aad u badan iyada oo waliba ay marar badan la soo dhibtoonayeen xidigo muhiim ah oo safafka kooxahooda ka maqan. Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa wali la dhibtoonaya dhaawcyo iyada oo xidigo muhiim ahi ay seegi doonan kulamada 12 aad ee La Liga.
Kooxda Atletico Madrid waxaa ka dhaawacmay 12 ciyaartoy iyada oo waliba kooxda Simeone xaalad adag ka soo dabaalatay kulamadii ugu danbeeyay waxayna wali ku sii jirtaa xaalad dhaawcyo inkasta oo Simeone uu calool adayg ka dhigtay in lala qabo musiibada dhaawacyada.
Atletico Madrid waxaa dhaawcyo kaga maqan 7 xidig oo ka mid aha kooxda kowaad ee uu Simeone ku shaqaynayay waxayna kala yihiin Lucas, Jose Gimenez, Stefan Savic, Thomas Lemar, Koke, Diego Godin iyo Diego Costa.
Diego Simeone ayaa ku faraxsan in waqtigan oo kale ayna kooxdiisu ku soo beegmin kulanka Barcelona kaas oo la ciyaari doono kulamada caalamiga ah kadib wuxuuna rajaynayaa in dhaawacyada kooxdiisu ay soo fiinaan doonaan muddada kulamada caalamiga ah.
Dhinaca Real Madrid waxaa soo gaadhay 14 dhaawac intii xili ciyaareedkan lagu jiray laakiin waxaa wali sii maqnaan doona Marcelo, Raphael Varane iyo Mariano Diaz kuwaas oo dhamaantood ka maqan liiska uu Solari u magacaabay kulanka Celta Vigo.
Dhaawacyada murqaha ayaa noqday kuwo dhibaato badan ku ah kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid halka Barcelona ay iskugu jiraan dhaawacyo kala duwan balse ay dhinaca murquhu ugu badan yihiin.
Waxaa Real Madrid hore min laba jeer uga dhaawacmay Gareth Bale, Marcelo ,Dani Carvajal iyo Jesus Vallejo halka Karim Benzema, Mariano, Varane iyo Odriozola ay dhamaantood ka mid ahaayeen dhibaatooyinka dhaawacyada Madrid.
Barcelona waxaa xili ciyaareedkan kooxdeeda soo gaadhay 7 dhaawac waxaana haddaba kooxda ka sii maqnaan doona Philippe Coutinho iyo Thomas Vermaelen waxaana hadda soo laabtay Lionel Messi iyo Samuel Umtiti oo rajaynaya in ay kulankoodii ugu horeeyay saftaan marka ay Barca wajahayso Real Betis.
Waxaa hore u soo dhaawacmay Luis Suarez, Malcom iyo Sergi Roberto waxayna jamaahiirta Barca sugayaan in ay kulanka Real Betis arkaan Messi iyo Umtiti oo safta maadaama oo uu Valverde liiska kooxdiisa ee kulankan uu ku soo daray.
Si kastaba ha ahaatee, nooca dhaawacyada kooxaha waa wayn ee La Liga ayaa xili ciyaareedkan u badan dhaawacyo murqaha ah taas oo muujinaysa in ay jirto xaalad caafimaad oo aan fiicnayn oo ay wajahayaan ciyaartoyda kooxaha saddexda ah ee La Liga ugu awooda badani.